Gudiga amniga Puntland oo amaro amni soo saaray xiliga caleema saarka madaxweynaha. – The Voice of Northeastern Kenya
Ayadoo lagu wado in dhawaan magaalada Garowe ay ka dhacdo xaflada lagu caleema saarayo madaxweynha cusub ee maamulka Puntland ayay gudiga amniga Puntland waxay soo saareen amaro amaanka lagu adkaynayo amaanka deegaanada maamulkaasi.
Magaalada garowe ee caasimada maamulka Puntland waxaa ka soconaysa qaban qaabada xaflada caleema saarka madaxweynaha Puntland Saciid C/laahi Deni iyo ku xigeenkiisa kuwaasoo lagu doortay 8-dii bishaan doorasho ka dhacday magaalada Garowe.
Gudiga amniga Puntland oo ay xubno ka yihiin wasiirada amniga,warfaafinta iyo dhamaan Taliyeyaasha ciidamada ayaa sheegay inay Samaynayaan isbadalo dhanka amaanka ah ka hor xaflada caleema saarka ah.
Xaflada Caleema saarka Madaxweynaha Puntland waxaa lagu casuumay Madaxda Dowlada dhexe ee Soomaaliya, Hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada,axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira,madaxweyneyaal hore,urur goboleedka IGAD,Midowga Africa iyo wakiilo kale oo ka socda Saaxiibada Soomaaliya.
Taliyaha Ciidamada Puntland Gen Muxyadiin Axmed Muuse ayaa sharaxaya awaamiirta amniga ee ay soo saareen gudiga amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo qorshayaashooda dhanka aniga ee ay ku wajahayaan xafladaas.
Dhanka kale Wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa sheegay in 26-ka bishaan Janaayo ay magaalada Garowe ka dhacayso xaflada Caleemo saarka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa sidaas darteedna loo baahan yahay in la sameey isbadalo amaanka la xiriira maadaama ay Garowe imaanayaan wafuud kale duwan.
Munaasabada Caleema Saarka Madaxweynaha Cusub ee Puntland ayaa waxaa isku arki doono wajiyo kala duwan oo isugu jira madax hore, kuwa hada shaqeeya, xubno mucaarad ah iyo kuwo oo khilaaf siyaasi ah ka dhexeeyo.
Wararka ayaa sheegaya in munaasabada Caleema Saarka madaxweynaha Puntland Saciid C/laahi Deni lagu Casuumay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo Xasan Sh Maxamuud,madaxweynaha hada talada Haya Maxamed C/lahai farmaajo, Ra’siulwasaare Xassan Cali Khayre,hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wada jir C/raxmaan C/shakuur,hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo axsaabta kale ee siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jira.
Xaflada Caleemo saarka madaxweynaha Puntland oo dhacaysa 26-ka bishaan oo ku beegan maalinka sabtida ayaa waxaa lagu wadaa inay halkaas isku arkaan madaxda dowlada dhexe iyo kuwa maamulada qaar oo iminka uu khilaaf siyaasi ah ka dhexeeyo.
← Senetarada Maraykanka oo u codeynayo sharciyo lagu soo afjarayo howlaha xannibmay
Madaxweynihii hore oo Soomaaliya oo sheegay in qanuun adag loo baahan yahay. →